हो, म भर्जिन छैन – महिमा सिलवाल « Kamana
हो, म भर्जिन छैन – महिमा सिलवाल
१४ वर्षको उमेरदेखि नै सेक्सको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो, जब रजश्वला भएको थियो ।
ब्वाइफ्रेन्ड नभएकाले सेक्सको अनुभव छैन, किसिङको अलिअलि छ ।
अभियस्ली यो उमेरमा सेक्स अफर त आउने नै भयो नि ।
कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर पोर्न फिल्म हेर्छु । पोर्न फिल्म हेरेपछि …. (थप भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न सकिएन)
जब कसैले मेरो मन नै जितेको छैन भने शरीर जित्ने कुरै हुँदैन । पहिले मन, त्यसपछि मात्र शरीर । यसमा नो कम्प्रोमाइज ।
तर मन मिल्यो, सम्बन्ध दिगो हुने भयो भने सेक्स गर्न विवाह नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । विवाह अगाडि पनि कुनै आपत्ति छैन ।
हो, यो उमेरमा सेक्सको अभाव महसुस हुनु नेचुरल कुरा हो । तर सबै आवश्यकता कहाँ भन्नासाथ पूरा हुन्छ र ? यसो सेक्स भिडियोहरू हेरेरै चित्त बुझाउँछु ।
त्यस्ता भिडियो हेर्दा काउकुती लाग्छ । कस्तो कस्तो फिल हुन्छ । दुई गिलास पानी पिउँछु । सबै ठण्डा हुन्छ ।
म अविवाहित हुँ, तर भर्जिन केटी होइन । यो उमेरमा आइपुग्दा प्रायः आधुनिक केटीले भर्जिनिटी गुमाइसकेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एक वर्षअघि मेरो लभरसँग सम्बन्ध भयो । त्यो नै मेरो पहिलो सेक्स अनुभव हो ।
आठ फिल्म खेलिसकेकी नवनायिका तथा मोडल महिमा सिलवालले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका विवादास्पद अभिव्यक्ति हुन् यी । रिलिजमा आइसकेको कारबाही तथा रिलिजको तयारीमा रहेका सकस, नो स्मोकिङ, कमिना, ताकतवर, बादशाह, झमेला तथा सुटिङ फ्लोरमा रहेकी यी नायिका वास्तवमा अभिनय र फिल्मको कामले भन्दा बढी यस्तै उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छिन् ।
एकपटक हिन्दी मुभी लगेर हेर्न खोज्दा मिस्टेकली ब्लु फिल्म परेछ । ब्लु फिल्म हेरेको भनेको त्यही हो, म ब्लु फिल्मको रेगुलर दर्शकचाहिँ होइन । अनि ब्लु फिल्म हेरेर यसो गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन ।
‘हो म अलि खुला विचारधाराकी छु, तर असामाजिक होइन । मिडियाबाट प्रश्न सोध्नुहुन्छ, म खुलेर कुरा गर्दिन्छु । यसरी कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा म एकदमै सेक्सी अनि रेगुलर ब्लु फिल्म हेर्ने केटीजसरी प्रिजेन्ट गरियो’, महिमाले गफिँदै भनिन्– ‘वास्तवमा भर्जिनचाहिँ छैन नै । बिहे नै गर्ने गरी लभ गरेको ब्वाइफ्रेन्डसँग एक्सिडेन्टली सेक्स भयो । सेक्स हुने नै एक्सिडेन्टली हो । ’ उनले खुलाइन्– ‘ब्लु फिल्म हेर्ने कुरामा चाहिँ एकपटक के भएको थियो भने एकपटक हिन्दी मुभी लगेर हेर्न खोज्दा मिस्टेकली ब्लु फिल्म परेछ । ब्लु फिल्म हेरेको भनेको त्यही हो, म ब्लु फिल्मको रेगुलर दर्शकचाहिँ होइन । अनि ब्लु फिल्म हेरेर यसो गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन ।’ महिमाले थपिन्– ‘हाम्रो समाजमा सेक्सलाई राम्रो तरिकाले लिइँदैन । तर यो प्राकृतिक देन हो । पशुदेखि लिएर मान्छेसम्म सबैलाई चाहिन्छ । पहिलाको जस्तो घरकै बन्देजमा बस्ने भन्ने हुँदैन भन्नेचाहिँ मेरो मान्यता हो ।’
जे भए पनि ४ वर्षअगाडि किशोर राना मगरको फिल्म कारबाहीबाट डेब्यु गरेकी चितवन कृपानगरकी २३ वर्षीया यी सुन्दरीलाई ८ मध्ये १ फिल्म मात्र रिलिजमा आए पनि यस्तै अभिव्यक्ति र विचारधाराले चर्चासँगै विवादमा पारेको छ । उनलाई चर्चामा ल्याउने अर्को विषय हट फोटोसुट पनि हो । तर अब भने उनी यी सबबाट टाढा भएर आफ्नो इमेज फेर्ने तयारीमा छिन् । ‘भर्खर भर्खर फिल्ममा आएका बेला कतिपय कुरा थाहा नभएर अरुभन्दा एक्स्ट्रा बनौं भन्ने हिसाबले मबाट धेरै कमीकमजोरी भएका छन्’, महिमा भन्छिन्– ‘अब भने आफूलाई सुधारेर एकदमै सादा हिरोइन बन्ने तयारीमा छु ।’
बीचमा पढाइ छोडेर फिल्मतिर तानिएकी यी सुन्दरी मेनेजमेन्टमा ब्याचलर गर्दै छिन् र यससँगै फिल्मी र ¥याम्प मोडलिङ करियरलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा पनि लागेकी छिन् । आउन त उनी बोल्ड र मोर्डन हिरोइन बनेर चाहन्छिन्, तर अभिनयचाहिँ गौरी मल्लको जस्तो आँखाबाट आँशु झारिदिने किसिमको गर्न चाहन्छिन् । ‘बच्चैदेखि धेरै मुभी हेर्थें । अरु पढाइमा ध्यान दिन्थे म फिल्ममा । नाचगान गरिरहन्थेँ र हिरोइन बन्ने सपना देख्थें’, महिमाले सुनाइन्– ‘म मोर्डन, ग्ल्यामर र बोल्ड हिरोइन बन्न चाहन्छु, तर एक्टिङ गौरी मल्लजस्तो आँखाभरि आँशु झारिदिने रोल गरेर टप हिरोइन बन्न चाहन्छु ।’
ग्ल्यामर र बोल्ड सिनमा पनि उनको धारणा अर्कै छ । ‘अहिलेसम्म जति पनि मुभी गरेँ, त्यसमा बेड र किस सिन दिन परेको छैन । त्यस्तो सिन दिन रेडी छु, तर फेमिलीको अगाडि शिर झुकाउन नपरोस् भन्नेमा सतर्क रहन्छु । बेड सिन कथाले माग्यो ठीक छ, तर कसरी लिने, कसरी दिने भन्नेमा भर हुन्छ । लोग्ने स्वास्नीको सुताइ भन्दैमा सबै देखाउन त पर्दैन नि । भनाइको मतलब भल्गर सिन नहोस् भन्नेमा सतर्क हुन्छु ।’